Fandrosoana, hono, hoe !
Malagasy mifampiresaka, fiteny vahiny no ampiasaina. Tanora mialavoly, fanimban-tena no atao. Ray aman-dreny manana-janaka: ompa ny androatokony. Mpampianatra sy mpanabe natao ho fitaratra, ratsy fitondrantena. Ny tanora ho dimby rahampitso, variana amin’ny zava-bahiny, sns. Ireo rehetra ireo, « fandrosoana, hono, hoe »! Ka raha fandrosoana araka ny lazain’ny sasany ireo, nahoana no mbola mifotetaka amin’ny tany tahaka izao i Madagasikara sy ny Malagasy? Porofo izany fa tsy famantarana ny fisian’ny fandrosoana ao amin’ny tany na firenena iray akory ireo fa vao mainka aza maneho fihemorana mankany amin’ny kizo.
… Diso tanteraka ny fandraisan’ny Malagasy sasany ny atao hoe « fandrosoana ». Heverin’izy ireny fa ilay fakan-tahaka sy fihinanana amam-bolony ny « zava-bazaha » na ny « zava-bahiny » no ambara fa « fandrosoana ». Tena izay ve anefa ny zava-misy marina? Mahita ny tena fandrosoana tokoa ve ny Malagasy, eny fa na ireo midradradradra sy milaza izany aza? Lainga marivo tototra sy fitaka be vava raha ny tahaka an’i Madagasikara izao no lazaina fa mandroso.
Tsy ilana raikipohy mameno pejy ny fandrosoana vao hita. Tsy maintsy misongadina eny hatrany ny firenena mandroso. Toraka izany koa ny mponina ao aminy. Raha tahaka izao ny atao hoe fandrosoana, aleo tsy mikatsaka izany akory na kely aza! Tsy mila antontanisa avoaka etsy sy eroa hoenti-manamarina azy fa iainana sy tsapa andavanandro.
… Tsy afa-mandroso ny firenena iray sy ny mponina ao aminy raha tsy mahalala sy manana ny teniny, ny taniny, ny fomba amam-panaony, ny tantarany, ny finoany, sns. Amin’ny alalan’ireny no hikatsahana ny tena fandrosoana marina. Ny ankoatra izay, resaka tiana hateza fotsiny… Ny olana, efa nokatsahin’ireo « tsy mahalala fomba » fatratra izay hahapotika ireny kolontsaina malagasy ireny, hany ka misy amin’ireo Malagasy sasany, indrindra fa ny tanora aza, tsy mahalala akory fa azy i Madagasikara.
Ny fiverenana an-doharano ihany no vahaolana tsara indrindra hanoherana ity sarintsarim-pandrosoana alentiky ny sasany ao anatin’ny sain’ny Malagasy ity.